network folder မမြင်ရတော့ပါ — MYSTERY ZILLION
network folder မမြင်ရတော့ပါ
December 2008 edited December 2008 in About Forum
registry ထဲ၀င်ပြီး.network နဲ့ ပတ်သက်တဲ့..ဟာ ကို ဖျက်လိိုက်မိတယ်..
အခု..စက်မှာ network card နှစ်ကဒ် ရှိတာ..run ထဲက နေပြီး
ncpa.cpl လို့ရိုက်ရင်.. ဘာမှ မပေါ်တော့ပါ..
error code ကတော့ "network folder was empty, unable to retrieve" ဆိုပြီး ပေါ်နေပါတယ်..
registry fix လုပ်ကြည့်တာလည်း ..မရပါဘူး.. နည်းလမ်းလေးများ မစ စေလိုပါတယ်..
nayzaraung wrote: »
အကိုရဲ.Networkက internet connection ရနေဆဲပဲလား
hello! ko zayarhtet!
ကျွန်တော် အဲဒီ command အတိုင်း..စမ်းကြည့်ပြီးသွာပြီဗျ..
successfully ဖြစ်တယ်.. ဒါပေမယ့်..မမြင်ရသေးဘူး..
netshfix နဲ့လည်း လုပ်ကြည့်တယ်.. successful ဖြစ်တာပဲ..
ဟုတ်ကဲ့အကိုရဲ. network က Service ရှိတယ်ပေါ့??
အကိုရဲ.network card ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ဦး
ဒီမှာသိသလောက်လေးနဲ.4နေရတာဟိဟိ:D:D
ကျွန်တော့်မှာ ip change ချင်တာ. change လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်..
netsh command နဲ့ ချိန်းဖို့ကလည်း..network card name ကို..
အင်းအကိုက registry ကိုကလိမိပီကိုး
microsoft site တစ်ခုမှာတော့..အဲလို..registry ထဲ မှားဖျက်မိရင်..
အဲဒီ code တွေကို restore.reg နဲ့.သိမ်းပြီး run လိုက်ရင်..fix ဖြစ်မယ်လို့..တော့ပါတယ်.
ဒါပေမယ့်..ကျွန်တော် .လုပ်ကြည့်တာ..registry ထဲ မသိမ်းဘူး..ဖြစ်နေတယ်..
Registry ကြောင်သွားရင် ပြန်ပြင်လို့ ရတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါလား။:39:
RegCure တော့ ရှိတယ်.
mzရဲ့ ဒီထဲမှာ အဲဒီဆော့ဝဲတွေ ရှိတယ်ဗျ။:)
အခု..စက်မှာ network card နှစ်ကဒ် ရှိတာ..
အကိုရေ... နဲနဲဉာဏ်မှီသလောက်ပြောကြည့်မယ်နော်... အကို registery ကိုသွားကလိမိတယ်ဆိုတော့... သွားဖျက်မိလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့မှတ်မိမှာပေ့ါနော်... ဒါဆိုရင် တခြားစက်ကိုသွား( networkCard နှစ်ကဒ်တတ်ထားတဲ့စက်ပေါ့ဗျာ ) အဲဒီစက်မှာ.. registery ၀င်။ ပြီးရင် ခုနက မှားဖျက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သွား ရောက်ရင် right click >>> export လုပ် ပြီးရင်လမ်းကြောင်းပေး save လုပ်လိုက်။ ပြီးတော့ အဲဒီ File ကို အကိုစက်ထဲထည့်ပြီးတော့ run ချလိုက်ပါလားဗျာ.... အမှားပါရင်ခွင်လွတ်ပါ။ ဤအမှားသည် ကျွန်တော်မသိသေးသော အမှားသာဖြစ်ပါကြောင်း...:77::77::77: